के हुन्छ दिमागमा जब तपाई सपना देख्नुहुन्छ ? यस्ता छन् सपना देख्नुका फाईदाहरु - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»के हुन्छ दिमागमा जब तपाई सपना देख्नुहुन्छ ? यस्ता छन् सपना देख्नुका फाईदाहरु
के हुन्छ दिमागमा जब तपाई सपना देख्नुहुन्छ ? यस्ता छन् सपना देख्नुका फाईदाहरु
By मनिषा थापा on २७ बैशाख २०७५, बिहीबार ११:४४ स्वास्थ्य/जीवनशैली
पिएनपिखबर, भक्तपुर : के तपाईले सोचेकै सपनामा आउने गरेको छ त ? सपना आउनु एक जैविक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। सपना आउने समय दिमागमा केहि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुन्छ जसले गर्दा सपना देखिरहेको थाहाँ हुने गर्छ। सपना देख्ने गर्दा केहि फाइदाहरु पनि छन्।
सपना जब आउँछ तब हाम्रो दिमागी अबस्था बताउने गर्छ। जस्तै :- यदि सपनामा देखेको कुरा भुलियो भने यसलाई डेम्नीशिया भनिन्छ। यदी तपाई कुनै चीज सपनामा गर्न सकिरहनु भएको छैन भने यसलाई (साइकोलोजिकल इशु) भन्न सकिन्छ। तर यो सपनामा मात्र हुन्छ। जब तपाई उठुनु हुन्छ यी सबैकुरा निश्चित भईसकेको हुन्छ। यति मात्र हैन सपना देख्नुको फाईदा र नोक्सान पनि हुने गर्छ ।
१. सपना देख्ने गर्नाले दिमागको रचनात्मक क्षमाता बढ्छ ।
२. इमोशनल ट्रमा वा पिडा छ भने आराम मिल्छ ।
३. कुनै पनि समस्या छ भने सपनाबाट हल मिल्नसक्छ ।
अझै केहि थप जान्नको लागि हेर्नुहोस भिडियो :